Tag: ndenye aha | Martech Zone
Tag: ndenye aha
Ndepụta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi :zụ ahịa: Nzọụkwụ 10 Iji Nwee Nsonaazụ Ka Mma
Ka m na-eso ndị ahịa na-arụ ọrụ na mgbasa ozi ahịa ha na atụmatụ ha, ana m ahụkarị na enwere oghere na mgbasa ozi ahịa ha na-egbochi ha izute ikike ha kachasị. Findingsfọdụ nchoputa: Enweghị nghọta - Ndị na-ere ahịa na-agakarị nzọụkwụ na njem ịzụta nke anaghị enye nghọta ma lekwasị anya na ebumnuche nke ndị na-ege ntị. Enweghị nduzi - Ndị ahịa na-arụkarị ọrụ dị ukwuu n'ịmepụta mkpọsa mana ọ na-efu ihe kachasị
Ndepụta maka Iwu na ire Ahịa Ngwa Gị
Satọde, Ọgọstụ 1, 2020 Wednesday, October 28, 2020 Douglas Karr
Ndị na-eji ngwa ngwa mkpanaka na-arụ ọrụ miri emi, gụọ ọtụtụ isiokwu, gee pọdkastị, lelee vidiyo, ma soro ndị ọrụ ndị ọzọ na-emekọrịta ihe. Ọ dịghị mfe ịzụlite ahụmịhe mkpanaka na-arụ ọrụ! Nzọụkwụ nyocha nke 10 iji wuo ma zụọ ahịa nke ọma na-akọwa ihe omume dị mkpa - usoro-site-na-esi site na ngwa ngwa ịmalite - iji nyere ngwa ọdịnala iru oke ha. Na-eje ozi dị ka ihe nlereanya azụmahịa maka ndị mmepe na ndị nwere olile anya okike, ihe omuma ihe mejupụtara
Inbound Marketing Checklist: Atụmatụ 21 maka uto
Mọnde, Jenụwarị 15, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Dị ka ị nwere ike iche n'echiche, anyị na-enweta ọtụtụ arịrịọ iji bipụta infographics na Martech Zone. Ọ bụ ya mere anyị ji ekekọrịta infographics kwa izu. Anyị na-elegharakwa arịrịọ anya mgbe anyị chọtara infographics nke gosipụtara naanị na ụlọ ọrụ ahụ etinyebeghị nnukwu ego iji wuo ihe ọmụma bara uru. Mgbe m pịrị na infographic a site n'aka Brian Downard, Co-guzobere ELIV8 Business Strategies, amatara m ha ebe anyị kesara ọrụ ndị ọzọ ha meworo. Nke a
Tinye aka na Social Media Strategy a megide 8-Point Checklist
Imirikiti ụlọ ọrụ ndị na-abịakwute anyị maka enyemaka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-ele anya na mgbasa ozi ọha na eze dị ka ọwa na-ebipụta ma na-enweta ihe, na-egbochi oke ikike ha nwere iji bulie mmata nke ikike ha, ikike ha na ntụgharị ha n'ịntanetị. Enwere ọtụtụ ihe na mgbasa ozi mmekọrịta, gụnyere ịge ndị ahịa gị na ndị asọmpi gị, ịgbasa netwọkụ gị, yana itolite ikike ndị gị na akara gị nwere n'ịntanetị. Ọ bụrụ n ’ịbelata nanị iwepụta akwụkwọ na ịtụ anya ire ọre ebe a
Ihe omuma ahia ahia gi zuru oke
Wenezde, August 31, 2016 Wenezde, August 31, 2016 Douglas Karr
Textbroker etinyela ọnụ ihe omuma a na Nzọụkwụ 5 na Usoro Ọganihu Na-aga nke Ọma. Ihe ndi 5 bu: Nyocha na nyocha nyocha Ebumnuche Okike na Crehazi Nhazi na Nhazi na edingchịkwa Ọ bụrụ na m afanye ihe ọ bụla, ọ ga-abụ Nkwalite. Ọ bụ ezie na ịgha mkpụrụ na ndị na-eme ihe ike na-enye aka, nkwalite ọdịnaya kwụrụ ụgwọ site na ọwa mmekọrịta, mgbasa ozi ala, na ịkwụ ụgwọ-kwa-ịkpa bụ atụmatụ dị ịtụnanya. Dịka, anyị na-amalite nkwalite mgbe anyị nyochachara na ọdịnaya ahụ na-ada ụda